andian-dahatsoratra lohataona ravina kamiao Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy lohataona ravina kamiao China
Ravin'olom-bary MAN MANARAKA Spring Spring 81434026331
Ny antony mahatonga ny loharano ravina hatao singa elastika amin'ny kamio dia indrindra satria ny loharano ravina dia afaka mampifandray ny famaky amin'ny vatana. Misy ny fivezivezena eo anelanelan'ny loharano ravina mba hiteraka fikororohana, izay afaka mamindra ny herin'ny kodiarana amin'ny fiara. Ho fanampin'ny fanalefahana, ny lohataona ravina koa dia miasa ho toy ny rafitra mpitari-dalana hifehezana ny kodiarana handehanana amin'ny làlana voatondro mifandraika amin'ny vatana, ka hiantohana ny fandidiana sy ny fitoniana tsara.
Ravina lohataona ravina Bar Sup9 ravina ravina lohataona 85434026052
Ny loharanon'ny ravina eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia mizara roa amin'ny endriny roa: loharano ravina maromaro ary loharano vitsivitsy. Noho ny fahasamihafana eo amin'ny hateviny sy ny firafitr'ireo endrika roa ireo, ny loharano misy ravina marobe dia mety indrindra amin'ny fiara mavesatra, ary lohataona ravina vitsivitsy no tena ampiasaina amin'ny fiara maivana.
Izahay dia mpanamboatra lohataona matihanina manome lohataona ravina maro sy loharano ravina vitsivitsy, afaka mamokatra ihany koa izahay araka ny sary an'ny mpanjifa.
Lohataona ravina Mercedes ravina 0003200202 fivorian'ny ravina lohataona
Ny loharano misy ravina lohataona multi-ravina no fahita indrindra amin'ny kamio mavesatra. Ity karazana lohataona ity dia misy takelaka vy maromaro apetraka ao anaty endrika telozoro mivadika. Ny lohataona tsirairay dia samy manana ny sakany sy ny halavany; ny isan'ny takelaka vy amin'ny lohataona misy ravina maro sy ny fiara tohana Ny fifandraisan'ny kalitaon'ny vy dia mifamatotra akaiky. Arakaraka ny takelaka vy, ny matevina sy ny fohy ny lohataona, ny lehibe kokoa ny hamafin'ny lohataona. Ny isan'ny takelaka vy dia mifandraika mivantana amin'ny vokatry ny fitrohana ny hatairana. Ny hateviny mety amin'ny takelaka vy dia tokony hamboarina mifanaraka amin'ny maodely manokana.
Ampahany amin'ny kamio Mecedes truck leaf Spring 9033201606
Ny tombony sy ny fatiantoka tsy dia misy lohataona ravina: Raha ampitahaina amin'ny lohataona misy ravina maro, ny loharano ravina kely kokoa dia afaka mampihena ny fifandirana eo anelanelan'ny ravina sy mampihena ny tabataba azo; ho fanampin'izany, ny famolavolana lohataona kely kokoa dia maneho ihany koa ny foto-kevitra maivana malaza ankehitriny, izay mandaitra Mihena ny lanjan'ny fiara, ary mihatsara ny fampiononana sy ny fampiononana ny fiara. Na izany aza, vitsy kokoa ny loharano ravina manana takiana avo lenta amin'ny fikirakirana ny haitao amin'ny fizarana, ary ny vidin'ny famokarana dia avo kokoa noho ny an'ny loharano ravina marobe.
Ampahany amin'ny kamiao Mampiasà ravina kamiao Mecedes Lohataona 9443000102
Ny iray amin'ireo antony dia ny fahasarotana amin'ny fikarakarana loharano ravina sy ny banga amin'ny fitaovana fanodinana.
Sarotra ny fomba fanodinana ny loharano ravina, ary mazàna mandalo fomba am-polony maoderina mihoatra ny ampolony ny fanodinana toy ny lamba sy ny famonoana. Ny mpanamboatra sasany dia mety manilika ny sasany amin'ireo dingana ireo noho ny fanangonana fitaovana tsy mety. Mety tsy dia miharihary amin'ny fisehon'ny lohataona ravina fa ny fotoana ampiasana azy Rehefa lava, dia ho voan'ny toe-pahasalamana toy ny fahatapahan'ny lohataona.
SUP9 Trailer Leaf Spring 9443200102 ho an'ny Mecedes
Ny iray amin'ireo antony dia ny drafitra famolavolana sy ny kalitaon'ny vokatra an'ny mpanamboatra lohataona ravina
Samy manana ny haavon'ny teknika sy ny fomba famokarana ny mpanamboatra lohataona samy hafa, ary tsy mitovy ny vidin'ny loharanon'ny ravina. Ny mpanamboatra lohataona matihanina, tompon'andraikitra ary matotra dia hanambatra ny tena ilain'ny mpanjifa sy ny fitaovana famokarana efa misy mba hahazoana fomba feno. Diniho, volavola drafitra famokarana vokatra avo lenta sy be mpampiasa ho an'ny mpanjifa.
Lohataona ravina kamiao mavesatra benz 9443200702
Raha ampitahaina amin'ny lohataona ravin-ravina nentim-paharazana, ny masobe dia azo ahena 30-40%, ary misy aza mahatratra 50%.
2. Ahena ny fanjifana solika
Ny lohataona ravina maivana dia manana ny vokatry ny fametahana tapa-vitsivitsy miaraka amina singa iray. Aorian'ny fihenan'ny lanjany dia mihena voajanahary ny fanjifana solika.
3. Fiara mitondra fiara mitondra fiara
Ny loharano ravina maivana dia mavesatra ny fifandraisana eo anelanelan'ny ravina tokana, izay mampihena ny fifandonana sy ny hovitrovitra ary mampitombo ny fampiononana.
Ampahany kamio avo lenta Ampiasao ny ravina Volvo lohataona 257653
1. Fandidiana malefaka
Raha ampitahaina amin'ny loharano nentim-paharazana misy fizarana mitovy, ny loharano maivana dia manana fanoherana ambany kokoa eo anelanelan'ny ravina, izay manampy ny lohataona hitazona toetra mampihovotrovotra tsara.
2. tabataba ambany
Rehefa mihena ny fikororohana ny lohataona ravina maivana dia mihena arak'izany ny tabataba izay mahafeno ny fepetra ara-teknikan'ny fiara.
3. Ela velona lava
Ny lohataona maivana dia mampihena ny fihenjanana amin'ny lohataona ravina ary mampitombo ny fiainana reraka amin'ny lohataona ravina tokana.
High Q Kualitasy SUP7 SUP9 Volvo kamiao ravina lohataona 257855
Sakany fanodinana: 50cm – 120cm azo namboarina
Ny hatevin'ny fanodinana: 5mm – 56mm azo namboarina
Famaritana: Namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa
Rafitra lohataona ravina: arakaraka ny filan'ny mpanjifa ny lohataona fizarana iray ka hatramin'ny efatra dia azo alamina
Modely azo ampiharina: fiara ara-barotra toy ny tranofiara, kamio mavesatra, kamio maivana, kamio kely, fiara fitateram-bahoaka, fiara elektrika sns.
Wholesale Volvo Truck Parts Leaf Spring 257868
Ny orinasanay dia nametraka fiaraha-miasa stratejika amin'ny Fangda Special Steel, ary ny loharano ravina rehetra novokarina dia vita tamin'ny vy vita amin'ny firaka avo lenta avy any Fangda, miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, ny elastika tsara ary ny fahombiazan'ny dingana.
Izahay dia nandalo ny rafitra fanamarinana iraisam-pirenena momba ny kalitaon'ny TS-16949, ary ny fizotrany tsirairay dia voasedra mafy mifanaraka amin'ny rafitra fizahana telo an'ny rafitra kalitao matihanina.
Tsinjarao ny lohataona ravina fampiatoana 257875 ho an'ny Volvo
Manana traikefa famokarana ravina lohataona mihoatra ny 10 taona isika, ary misy tsipika famokarana ravina lohataona maromaro.
Izy io dia mandray ny fitaovana famokarana mandroso indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria, misy milina fanodinam-bokatra mandeha ho azy, earphone coil automatique feno, milina fipoahana mafy, tsipika fivoriambe mandeha ho azy, asa famokarana voamarina, fanahafana marina ary manafoana ny fiviliana.
60Si2Mn kamiao ravina kamiao 257888 ho an'ny Volvo
1. Ny mari-pahaizana ara-materialy dia vy vy 60Si2Mn, izay afaka mahafeno tanteraka na hihoatra ny fepetra takiana amin'ny fenitra nasionaly. Ny ankamaroan'ny akora dia avy amin'i Fangda Special Steel Technology Co., Ltd. Ireo fitaovana dia manana ny refy avo lenta sy ny fahombiazan'ny mekanika sy ny teknolojia.
2. Ny fivoriambe dia vita amin'ny teknolojia fandavahana tanteraka sy ny kalitao mazava tsara.
3. Ampiasao loko mandoko mandeha ho azy elektrostatika avo lenta, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny zavona asidra, fanoherana rano mahery, ary kalitao tsara miseho.
4. Amin'ny fampiasana bushing bimetal, ny bushing dia manana fiainana maharitra, maharitra matevina ary tsy mora harafesina.